Museums uye Wiricheya | Karman® Mawiricheya
Posted on December 13, 2017 November 20, 2020 by csr 1687
Mamuseum uye Nei Uchifanira Kuenda
Kuenda kumuseum kunopfuura kungoenda kumuseum. Ivo chaizvo wiricheya kufambidzana nekuda kwenzvimbo dzakatetepa uye iyo ramp vanopa. Iyi inzvimbo yakanaka yekunakirwa neSvondo masikati nemhuri uye neshamwari. Zvakare, mamuseum mazhinji akasununguka kana akaderera kwazvo mutengo. Icho chimwe chezviitiko zvinonakidza zvaunogona kuita chero chaunoda. Muchikamu chino, tichaenda pamusoro pekuti ungatanga sei kuenda kwavari uye kuti ungaita sei nezvekuenda kumamiyuziyamu. Zvinongedzo zvichave akapiwa kugutsa izvo zvinosanganisira zvimwe zvakadzama zvezvimwe zvinhu zvakaita semamiziyamu, mitengo, nzvimbo, nezvimwe. Tinokukurudzira kuti ugovane neshamwari dzako kunyangwe dzisiri wiricheya mushandisi nekuti vanogona kunakidzwa nemuseum zvakare.
Unofanira Kuenda Here?
Iyo miziyamu chimwe chinhu munhu wese anogona kuita nekuti haina zera muganho kana haina kuenderana nevakadzi. Kune akawanda mamuseum mazhinji aripo kune veruzhinji aunogona kutanga kunakidzwa nhasi. ichi iri chinongedzo kune runyorwa rweLA nzvimbo dzaunogona kushanyira. Imwe neimwe ine yayo maficha uye zvinokwezva. Kana iwe usingagare muLos Angeles ipapo ichi link ichauya inobatsira nekuti ine dhairekitori ravo zvichienderana nedunhu rako. Enda kuburikidza nerunyorwa rweguta rako uye uwane nzvimbo iri padyo newe uye uwane musimamende iwe une zvakawanda zvaunofarira.
Chinhu chimwe chete chekucherechedza ndechekuti kana iwe usiri kufarira chimwe chinhu haunetseke zvakanyanya kuterera. Ndokusaka iwe uchifanira kufunga imwe yakabata kufarira kwako kuti usazoenda uye uve nemanzwiro ekubva. Edza kushanyira nzvimbo dzakawanda panguva yemazuva kana iri zvinogoneka. Chikonzero chakanaka chekuenda kunzvimbo dzakawanda ndechekuti iwe unogona kunakirwa zvakanyanya nekuwedzera zvaunofarira. Iwe unogona zvakare kumisikidza s purogiramu yekuenda pane rimwe zuva revhiki. Bvunza mhuri yako kana shamwari zvavanobvumirana nazvo uye enda kubva ipapo.
Chii Chinoitika kuMuseum?
Paunoshanyira musimamende vane mafambiro ekushanya anogona kukutora iwe uye kukupa pfupi nhoroondo yechidzidzo kana zvidzidzo. Vamwe vanobhadharisa kamari kashoma kana kuda a huwandu hwevanhu kuti vapinde mukushanya. pano muenzaniso wekushanya mitengo. Iyo LA Museum yeakaitika nhoroondo inobhadharisa vakuru i $ 8.50 pamunhu uye ivo inoda iwe kuve nevashoma vevashanyi gumi kuti vakwanise kutora rwendo. Vanopawo maratidziro akasarudzika aunofanirwa kubhadhara madhora zana asi izvo zvinofanirwa kungotariswa kana iwe uchinzwa kuti unofarira zvikuru musimamende.
Koreji Yakasungwa Wiricheya Vashandisi